Maxaad ka ogtahay xidhiidhyada mushaharka?
Haddii qof i weydiiyo waxa ugu muhiimsan ee raadinta mashiinka raadinta waa, waxaan ka jawaabi doonaa in ay tahay shaki la'aan dhabarka. Waxba dhib ma leh sida aad u hesho. Waxyaabaha ay tahay waa inay noqdaan kuwo ka sii badan iyo kuwa ka sii fiican. Ha aaminin qof walba oo sheegaya in dhismaha xidhiidhka uu dhintay. Qoraalkan khaldan ayaa ku faafaya webmasters aan la xakamayn oo aan khibrad lahayn oo dhowaan lagu ciqaabay mashiinno raadin.
Haddii ujeedadaada ganacsiga asaasiga ah ee internetka ay tahay inaad soo jiidatid taraafikada taranka ee shabakadahaaga, markaas waxaad u baahan tahay inaad diirada saarto dib u dhiska. Qodobkani, waxaan ka wada hadli doonaa sida loo iibsado niche backlinks iyada oo ujeedadu tahay soo jiidashada hogaaminta goobtaada.
Doorka dib udhexaadinta ee horumarinta ganacsiga internetka
Mashiinnada raadinta sida Google ayaa go'aamiya maamulka goobtaada iyo sumcaddeeda lambarka iyo tayada dhabarka ee soo socda goobta laga helo ilaha kale ee webka. Xiriirada soo socda ee boggaaga waxaa sidoo kale loo yaqaannaa xiriirada gudaha ama kuwa gudaha ah. Haddii ilaha webka ay leeyihiin xiriiro badan oo ka imanaya PR9 ama 10 bogag internet ah, ka dibna waxay u badan tahay in ay ka sarreeyaan TOP ee bogga natiijada raadinta.
Haddii aad wali ka walaacsan tahay doorka dib-u-kicinta ee ganacsigaaga internetka, aan kula wadaagno faa'iidooyinka muhiimka ah ee nashaadka dhismaha isku xirka:
Raadinta moobiilka raadinta
Haddii websaydhkaagu ku xiran yahay ilaha webka ee la xidhiidha tayada sare leh ama warbaahinta internetka, Google ayaa soo jiidan doonta marxaladdan oo kale oo siinaya heerka sare ee bogga natiijada raadinta.
Haddii aad haysato barta internetka ee boggaaga, Google wuxuu muujin doonaa waxyaabo cusub oo aad daabacan tahay. Si kastaba ha noqotee, kuwa gurguurta ayaa si kala duwan u kala soocaya boggaaga haddii ay helaan raadsasho cusub oo tilmaamaya. Dib-u-qabadka badan ee aad hesho, heerka wanaagsan ee boggaaga taranka ayaa noqon doona mid faa'iido leh oo loogu talagalay ujeedada raadinta boggaaga ee raadinta.
Backlinks tayada waxay keeni kartaa gaadiid farabadan oo badan bogagga boggaaga. Gawaaridan ayaa sidoo kale saameyn kara bogaggaaga PageRank iyo kor u qaadida maamulka domainkaaga. Intaa waxaa dheer, gaadiidka gudbinta inta badan waxay u beddelaan iibsashada.
Miyaad u baahan tahay inaad soo iibsato backlinks?
Iibsashada backlink waa habka ugu dhaqsiyaha badan ee lagu iibsado. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad haysato hab caqli ah oo geedi socodkan ah. Waa inaad ogaataa in iibsashada links, aad jebiso tilmaamaha Google webmaster. Sidaa darteed, haddii aadan haysan hab caqli ah oo dib-u-qabsiga iibsashada ah, waxaad u badantahay in aad ciqaab ka qaadato sida dib-u-dhigista, luminta jagooyinka heerka, iyo wixii la mid ah.
Sida ficil ahaan u muujiso, khatarta aad bay u saraysaa markaad iibsato xiriirka qiimaha hooseeya, sida $ 5 halkii link. Xaaladaha badankood, qiimaha noocan oo kale ah waxa ay ka hadlaysaa tayada hoose ee ilaha webka ee adiga ku siiya. Qaar badan oo ka mid ah bogagga spammy sida waxaa la abuuray iyada oo keliya ujeedada kaliya ee lagu iibsado iyo iibiyo xiriirrada galmada. Google si sahlan ayaa loo ogaan karaa boggaan oo kale iyaga oo ciqaabi kara, oo waxaa lagaa helayaa inaad ka soo horjeeddo Source .